Tananan'Antsirabe: Mitohy ny gaboraraka sy ny tsy fanarahan-dalàna
mardi, 12 juin 2018 16:21
Raha ny nambaran'ireo mpanolotsainan'ny Tanàna, izay maro an'isa, dia efa nisy hatrany ny fanairana ataon'izy ireo fa manao anjolofo ny Ben'ny Tanàna sy ny mpiara-dia aminy, noho ny fahatokisany ny fitondram-panjakana ho miaro azy.
Raha ny fantatra dia nisy fivoriana tsy ara-potoana tokony hanomboka ny androany 12 jona, ka hanampahana lahadinika maromaro, toy ny fifidianana fanoloana ny toeran'ireo mpikambana eo anivon'ny Biraon’ny mpanolotsainan'ny Tanàna, izay nametram-pialana ara-dalàna, fandinihina ny fitsipika anatin'ny mpanolotsaina, fividianana fiara "Pompier" ho an'ny Tanànan'Antsirabe, ary fandinihina ny teti-bola nasiam-panitsiana izay mahakasika ny fandraisana ireo Polisy monisipaly vaovao, polisin'ny tsena sy ny FDL.
Nivoaka ny trano anefa ireo mpanolotsaina maro an'isa, satria nisy ny fanapahan-kevitra efa vita sonian'ny filohan'ny mpanolotsaina sy ny Ben'ny Tanàna ny faha-14 febroay 2018, kanefa tsy nisy fivorian'ny mpanolotsaina akory tamin'izany, izay efa nanapahana ny fampiasana ny volan'ny FDL ka nanaovana lalana 7 Km, nandaniana ny vola 15 tapitrisa Ariary, izay nolazaina fa efa vita kanefa vao ho tapahina amin'ny lahadinika androany.
Ankoatra ireo dia voalaza fa efa nalaina any Tolagnaro ny fiara Pompier hovidian'ny Kaominina kanefa mbola vao haroso ho tapahin'ny mpanolon-tsaina izany. Ankoatra ireo moa dia mbola marobe ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny Ben'ny Tanàna araka ny tatitra nentin'ireo mpanolotsaina maro an'isa ihany.
Andrasana indray ny vokatry ny fihaonan'ny mpanolotsaina any amin'ny Prefektiora anio.